Warqad: DF oo booliska Malaysia u adeegsatay inay baajiso munaasabadda CC Shakuur – Hornafrik Media Network
Warqad maanta ka soo baxday booliska magaalada Kualalumpur ee dalka Malaysia ayaa lagu sheegay in aysan dalkaas ka dhici karin munaasabad soo dhaweyn loogu sameynayey siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Amarka ka soo baxay booliska ayaa sida la sheegay yimid kadib markii safiirka Soomaaliya u fadhiya Malaysia uu taliska booliska ka dalbaday in la joojiyo munaasabadda lagu soo dhaweynayo siyaasiga oo ay qaban qaabadeeda ku jireen inta badan ardayda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Malaysia.
Xogta aan helnay waxay sheegeysa in safiirku booliska uu ku qanciyey inay jiraan dad badan oo u careysan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo uu sheegay in khudbad uu hadda ka hor ka jeediyey dalka Jarmalka ay ka dhalatay caro badan, isla markaana ay macquul tahay in dhib ka dhaco goobta.
Hoggaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waayihii dambe waxa uu dalka dibadiisa ka waday socdaal uu ku maray wadamo dhowr ah, kuwaas oo uu kula kulmay dadka Soomaaliyeed ee ku nool.
61eccb61 3e0b 4d62 9adb 66ba36490c6f
Ciidamada dowladda oo soo bandhigay sarkaal sanado badan ka tirsanaa Al-Shabaab